Bamboo cusub oo loo yaqaan 'Bamboo Ink Plus' bilaa baytariyaal ah iyo Windows 10 | Abuurista khadka tooska ah
Waxay u muuqataa been, laakiin sugitaanka in la sameeyo ka socda iibsashada kuwa baytariyada AAAA ilaa Stylus way dhammaataymaaddaama shirkadda Wacom ay ku dhawaaqday Stylus cusub oo diiradda saaraya hagaajinta waayo-aragnimada sawir-qaadashada ee dadka isticmaala Windows 10.
Qalabaynta Windows Ink Workspace Stylus iyo waxaa loogu yeeraa Bamboo Ink Plus iyada oo ah tusaale dib-u-buuxin kara hal abuureyaasha ilaawi kara inay u baahdaan baytariyadaas la sheegay.
Bamboo Ink Plus isticmaalayaasha Waxay dhinac iska dhigi karaan batariyada AAAA oo waxaad diirada saartaa Stylus-kan cusub oo raadinaya wax ka badan khibrad hal abuur leh. Waxaa lagu gartaa hal badhan oo, markii la riixo, bilaaba Windows 10 barnaamijyo hal abuur leh sida Bamboo Paper iyo Screen Sketch.
Bamboo Ink Plus ayaa la socda janjeera aqoonsi, ka jawaabcelin ballaadhan iyo talooyin la isku-beddeli karo si loogu qaado waayo-aragnimada sawirka iyo farshaxanka heerka xiga. Waa in la caddeeyaa in aynaan wajahayn Wacom-kii ugu horreeyay ee si buuxda u dhaafa batariyada, durba maalintiisa waxay ku salaysnayd tiknoolajiyada elektaroonig-ka-soo-celinta si loo helo tamarta lagama maarmaanka ah.
Tiknoolajiyaddaas wuxuu noo ogolaanayaa inaan la shaqeyno Styluskeena bilaa batari ama fiilo iyo dhammaan mahadnaqa dareemayaasha dhaliya aagga magnetka. Marka stylus dib loo buuxin karo oo leh astaamahaas ayaa lagu sheegay inay ka badan tahay imaatinka buugga 'Wacom'.
La Bamboo Ink Plus waxaa lagu qiimeeyaa 99,90 euro waxaana laga heli karaa dukaanka Wacom. Waa inaan aragnaa helitaanka qaybahaas, maadaama xilligan aysan ka muuqan dalkeenna. Wax walba waxay noqon doonaan arrin la sugo oo la awoodo in la arko si loo helo. Waxaan iri, gebi ahaanba imaatinka Wacom. Ha moogaanin warar kale oo ku saabsan Wacom iyo taageeradeeda isku xirnaanta HDMI taasina waa mid dan weyn laga leeyahay sababo muuqda awgood.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Wacom waxay ku dhawaaqeysaa Bamboo Ink Plus sidaa darteed waxaad ku hilmaami kartaa baytariyada